CL – Guruub D: Kooxaha Atletico Madrid iyo Bayern Munich oo u soo baxay wareegga 16-ka koobka horyaallada Yurub kaddib guulo ay gaareen… + SAWIRRO – Gool FM
CL – Guruub D: Kooxaha Atletico Madrid iyo Bayern Munich oo u soo baxay wareegga 16-ka koobka horyaallada Yurub kaddib guulo ay gaareen… + SAWIRRO
(Yurub) 02 Nof 2016 – Kooxaha Atletico Madrid iyo Bayern Munich ayaa xaqiijiyey inay u soo baxeen wareegga 16-ka koobka horyaallada Yurub ee Champions League kaddib guulo min 2-1 oo ay ka gareen FC Rostov iyo PSV Eindhoven.
Labo gool oo uu labadii qeybood ee ciyaarta u dhaliyey Antoine Griezmann ayey kooxda Atletico Madrid guul 2-1 uga gaartay FC Rostov, waxaana ay sidaas ugu soo baxday wareegga 16-ka Champions League.
Dhinaca kale Bayern Munich ayaa guul 2-1 ka gaartay PSV Eindhoven oo ay booqatay waxaana ay naadiga reer Jarmal ku adkaatay labo gool oo midi rigoore ahaa oo uu u dhaliyey weeraryahankooda Robert Lewandowski.
Kooxaha Atletico Madrid oo haatan 12-dhibcood leh iyo Bayern Munich oo 9-dhibcood leh ayaa u soo baxay wareegga 16-ka koobka horyaallada Yurub ee Champions league laakiin waxa ay u tartami doonaan kooxda ku soo baxaysa kaalinta koowaad.
Guruubka D ee Champions League sidan ayaa loo kala sarreeyaa:-
SAWIRRO BAYERN MUNICH:
“Naga tag Doqon yahoow.”. Lionel Messi oo carreysan kaddib guul daradii xalay ayaa sidaa ku yiri mid ka mid ah xiddigaha Man City